Madaxwaynaha Soomaaliya oo Jaamacadda Carabta kacodsaday inay taageeraan dib u dhiska dalka Soomaaliya. – Radio Daljir
Madaxwaynaha Soomaaliya oo Jaamacadda Carabta kacodsaday inay taageeraan dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Baghdad, Mar 30 -Madaxwaynaha dowladda KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maalintii shalay khudbad ka jeediyay shirkii dalalka ku bahoobay ururka Jaamacdda Carabta ee ka furmay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq muddo labaatan sanadood kadib ayaa ka hadlay xaalada dalka Soomaaliya.
Madaxwaynaha ayaa waxaa uu khudbadiisa uu kaga hadlay guulaha ay dowladdu ka gaartay dagaalka ay kula jirto ururka Al-Shabaab ee ku biiray Al-Qaacidda, waxaana uu sheegay xiligaan inay muuqanayso horumaro badan oo dhinaca amniga ah oo laga sameeyay dalka,waxaana tusaale uu usoo qaatay shirarkii kale duwanaa ee lagu qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe.
Madaxwaynaha dowladda faderaalka ayaa dhanka kale ka codsaday dowladaha shirka Jaamacadda Carabta kasoo qaybagalay inay ka taageeraan dib u dhiska dalka Soomaaliya, ayna u gargaaraan dadkii Soomaaliyeed ay ku habsatay abaarihii ku dhuftay gobolada dalka.
Sheekh Shariif ayaa sidoo kale sheegay dalalka Jaamacdda Carabta in looga baahanyahay inay kaalin muhiim ah ka ciyaaraan xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaana sidii shacabka Soomaaliyeed taagero loogu fidin lahaa dib u dhiska dalkooda.